Hambalyo iyo duco Garaad Maxamed Garaad Abshir halayga gaadhsiiyo. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Hambalyo iyo duco Garaad Maxamed Garaad Abshir halayga gaadhsiiyo.
Hambalyo iyo duco Garaad Maxamed Garaad Abshir halayga gaadhsiiyo.
Garaad Maxamed Garaad Abshir hambalyo iyo duco kadib waxaan leeyahay mid, Garaad Jaamacna midhkaas mid u yar eg ayaan isagana leeyahay ee ha la iga gaadhsiiyo.
Garaad Maxamedow maanta waxa laguu dhiibay xil weyn iyo masuuliyad ifka haddaan lagugu la xisaabtamin, hubaal aakhiraa lagugu la xisaabtami doono. Isku day shaqada laguu diray in aad ku dedaasho.Maanta waxa aad Guuleed Garaad, Dhulbahante, iyo Soomaaliba aad la dhex timi buug madhan oo waraaqihiisu cad yihiin.
Adiga ayay kugu xidhan tahay waxa aad rabto in laguugu qoro oo uu sooyaalkaagu noqdo.Waxa aan kugu la talinayaa in aad mid Garaad Jaamac kaga dayato: xornimo ku noolaansho aadan hoos tegin maamullada dhinacyada kaa xiga. Iska ilaali in cimaamaddaada aad ugu shaqayso siyaasi aan qadiyad lahayn oo dadkiisa iibiyay.
Deegaankaaga oo Widhwidh u horrayso ha dhaafin oo tolkaa ku dhex jir ka na war hay.Mid kalena ku dar: isku day inaad si deggan oo caqli ku jiro in aad uga nadiifiso horgallada deegaankaaga jooga si aad u soo reebto in gob ah oo gobannimada kaala shaqaysa.
Waan hubaa in ay dal iyo dibadba joogaan hormuud Guuleed Garaad ah oo arrintaas garab kuugu noqonaya.
Garaad Jaamac waxaan leeyahay: Garaad horta dhiggaaga waad dhaantaa oo labada Laan midna marti u maad noqon. Laakiin, intaasi nagu ma filna. Saaxdheer, Qoriley, Kalabaydh, iyo deegaanka kale ee reerkaagu dego waxa habboon inaad isku deydo inaad qadiyaddaada ka dhaadhiciso oo ka socodsiiso.Garaad qoyskiisa hoose qancin kari waaya way adagtahay in uu beel dhanna hoggaamiyo ama saamayn ku yeesho.
Tallaabadii koobaad oo kuwii ku la midka ahaa aanay qaadin adigu waad qaadday balse kaabaddaas in aad ku densato sax ma aha.
Previous articleJawaabta Akadeemiyada Cilmiga, Fanka & Suugaantu ma tabeelahaa baa.
Next articleMarkii ugu horreysay, Vatican-ku wuxuu soo bandhigayaa macluumaad ku saabsan guryaha ay leeyihiin.